Chikumi 24, 2018 arun
Bitcoin anosiya wayo rakadzikadzika pamwero kubva November 2017
Bitcoin kumbova yakaderera kubva November uye mutengo wayo aregedza ne kumativi $ 1,000 pamusoro okupedzisira maviri kusvika itsva pasi pakati $ 5,800.
Ndicho yakadereresa pfungwa mumwedzi zhinji, kuvatumwa muna February, kana vakawira $ 6,000, kuvatumwa muna April, payaipera $ 6,000 uye akanga kuvatumwa mutengo kubva October, kunze kwenguva kuwa muna November.
Mavhoriyamu aro uyewo payakaramba pamusoro $ 3.6 bhiriyoni, hafu yaro samambure vanokwanisa zvino kupedzerwa 0.46 MB bitcoin misa saizi.
Izvi zviri zvishoma pane chinokosha backlogs kuti vakashandisa kuonekwa, sezvo Bitcoin kwakaita blockchain ava kushandiswa zvishoma pane zvakanga zviri 2015.
zvisinei, ravo musika mugove iri kuwedzera, asi avo musika capitalization vachawira chete pasi $ 100 bhiriyoni kokutanga mumwedzi zhinji.
Pane here chikonzero zita iri paanochinja ichangopfuura. Hakuna kumbova Exchange, kwemakore mana hapana nejichidza dema asara Bitcoin.
Naizvozvo aigona kunge nyaya titenge runyerekupe, kutengesa nhau, nerunyerekupe kuti scalability gakava kuri kuitika, uye nhau ndiko kutanga Mheni Network (LN).
The yokupedzisira vanotarisirwa kuti kugumbura kusvikira yose Bitcoin Network nezvokubhadharwa, sezvo chinoshanda sezvo ndizvidavirire maitiro uye nokudaro kwakasiyana blockchain mutengapwe.
It rakashandisa niches, asi nekuda kwema zuva nezuva, ari LN bitcoin inova shoma zvikuru dzisingashandi BitCoins parutivi nyore kuti vari kare kusununguka pachavo.
Usability ndiyo pfungwa kuti chakaitwa kare, uye cryptos vaenda zvimwe nzira mugwara, asi zvino basa nokuti Bitcoin angava zvishoma kuoma.
Asi hapana munhu aiita hanya usability kana kupomerwa vaiva $ 70 uye munhu wose ari kutanga kutengesa. Naizvozvo tsananguro zvechokwadi aigona kuva nyore zvitengeswa uye kudiwa.
Romugove rakange rakacherwa hafu nokuda Bitcoin mu 2016, zvokuti mutengo akasimuka zvishoma nezvishoma uye akamuka, zvino muna December kumuka nokukurumidza zvikuru.
Panguva iyoyo vakawanda kuchera Hardware kukawira. Zvino parameters izvi zviviri zvitengeswa uye kudiwa vanoedza kusvika pakati nepakati.
Apo kuti vanogona kuonekwa, uye izvo mucheri unofanira kutanga pakudimurisa kusauka, zvichaita pamwe nokukurumidza kutaura. Panguva iyi, pamwe Bitcoin angawana chinhu chimwe zvakare kupfuura mutengo unogona kutaura nokuti mutengo aizowana hakunakidzi kwekanguva.
Kraken Daily Market Mushumo 23.06.2018
$153M nhumbi mhiri misika zvose nhasi